Una Ikhukhi yifayela lombhalo akunangozi okugcinwa kusiphequluli sakho lapho uvakashela cishe noma iliphi ikhasi lewebhu. Ukuba usizo kwe- Ikhukhi ukuthi iwebhu iyakwazi ukukhumbula ukuvakasha kwakho lapho ubuya uzobhekabheka lelo khasi. Yize abantu abaningi bengazi, amakhukhi Zisetshenziswe iminyaka engama-20, lapho kuvela iziphequluli zokuqala zeWorld Wide Web.
LIYINI ALIKHO ikhukhi?
Akuyona igciwane, hhayi iTrojan, hhayi isibungu, hhayi ugaxekile, hhayi i-spyware, noma kuvule amawindi avelayo.
Yiluphi ulwazi olwenza a Ikhukhi?
I-Las amakhukhi Imvamisa abagcini imininingwane ebucayi ngawe, njengamakhadi wesikweletu noma imininingwane yasebhange, izithombe, i-ID yakho noma imininingwane yakho, njll. Idatha abayigcinayo ingeyobuchwepheshe, okuthandwa nguwe, okwenziwe ngezifiso kokuqukethwe, njll.
Iseva yewebhu ayikuhlanganisi njengomuntu kodwa nesiphequluli sakho sewebhu. Empeleni, uma uvame ukuphequlula nge-Internet Explorer bese uzama ukudlulisa amehlo kuwebhusayithi efanayo neFirefox noma i-Chrome, uzobona ukuthi iwebhusayithi ayazi ukuthi ungumuntu ofanayo ngoba empeleni ihlanganisa isiphequluli, hhayi umuntu.
Hlobo luni lwe amakhukhi zikhona?
AmakhukhiAmasu: Yizinto eziyisisekelo kakhulu futhi zivumela, phakathi kwezinye izinto, ukwazi ukuthi umuntu noma uhlelo lokusebenza oluzenzakalelayo luphequlula, lapho umsebenzisi ongaziwa nomsebenzisi obhalisiwe bephequlula, imisebenzi eyisisekelo yokusebenza kwanoma iyiphi iwebhusayithi enamandla.
AmakhukhiUkuhlaziywa: Baqoqa imininingwane ngohlobo lokuzulazula okwenzayo, izigaba ozisebenzisa kakhulu, imikhiqizo ebonisiwe, isikhathi sokusetshenziswa, ulimi, njll.
AmakhukhiUkukhangisa: Zikhombisa ukukhangisa okususelwa ekuphequluleni kwakho, izwe lakho lokuzalwa, ulimi, njll.
Yini i- amakhukhi own kanye nalabo besithathu?
I-Las amakhukhi akho yilawo akhiqizwa yikhasi olivakashelayo kanye ne- kusuka kubantu besithathu yilawo akhiqizwa ngamasevisi wangaphandle noma abahlinzeki abanjengo-Facebook, Twitter, Google, njll.
Kwenzekani uma ngikhubaza i- amakhukhi?
Ukuze uqonde ububanzi obenza kungasebenzi i amakhukhi Ngikukhombisa izibonelo ezithile:
Ngeke ukwazi ukwabelana ngokuqukethwe okuvela kuleyo webhusayithi ku-Facebook, ku-Twitter noma kunoma iyiphi enye inethiwekhi yokuxhumana nabantu.
Iwebhusayithi ngeke ikwazi ukuvumelanisa okuqukethwe nezintandokazi zakho, njengoba kwenzeka njalo ezitolo eziku-inthanethi.
Ngeke ukwazi ukufinyelela indawo yomuntu siqu yaleyo webhusayithi, njenge i-akhawunti yami, noma Iphrofayili yamioImiyalo yami.
Izitolo eziku-inthanethi: Kuzoba nzima ukuthi uthenge online, kuzofanele ukuthi kube ngocingo noma ukuvakashela isitolo sangempela uma sinakho.
Ngeke kwenzeke ngokwezifiso okuncamelayo kokuma kwezwe okufana nendawo yesikhathi, imali noma ulimi.
Iwebhusayithi ngeke ikwazi ukwenza izibalo zewebhu kuzivakashi nakumathrafikhi kuwebhu, okuzokwenza kube nzima ngewebhu ukuthi incintisane.
Ngeke ukwazi ukubhala kubhulogi, ngeke ukwazi ukulayisha izithombe, ukuthumela imibono, ukukala noma ukukala okuqukethwe. Iwebhu nayo ngeke ikwazi ukwazi ukuthi ungumuntu noma uhlelo lokusebenza oluzenzakalelayo olushicilelayo ugaxekile.
Ngeke kwenzeke ukukhombisa ukukhangisa okuhlukaniswe ngomkhakha, okuzonciphisa imali engenayo yokukhangisa kuwebhu.
Wonke amanethiwekhi omphakathi asebenzisa amakhukhiUma uzenza zingasebenzi, ngeke ukwazi ukusebenzisa noma iyiphi inethiwekhi yokuxhumana nabantu.
Yebo. Hhayi ukususa kuphela, kepha futhi vimba, ngendlela ejwayelekile noma ethile yesizinda esithile.
Ukususa amakhukhi wewebhusayithi kufanele uye ekucushweni kwesiphequluli sakho futhi lapho ungasesha labo abahlobene nesizinda okukhulunywa ngaso bese uqhubeka nokususwa kwaso.
Izilungiselelo amakhukhi iziphequluli ezithandwa kakhulu
Nakhu ukuthi ungafinyelela kanjani kufayela le- Ikhukhi isiphequluli sizimisele Chrome. Qaphela: lezi zinyathelo zingahluka ngokuya ngohlobo lwesiphequluli:
Iya kuzilungiselelo noma izintandokazi ngemenyu yefayela noma ngokuchofoza kusithonjana sokwenza kube ngokwakho esivela phezulu ngakwesokudla.
Uzobona izigaba ezahlukahlukene, chofoza inketho Khombisa izinketho eziphambili.
Iya ku Ubumfihlo, Izilungiselelo zokuqukethwe.
Khetha Wonke amakhukhi nedatha yesayithi.
Uhlu luzovela nayo yonke imininingwane ye- amakhukhiihlelwa ngesizinda. Ukwenza kube lula kuwe ukuthola i- amakhukhi kwesizinda esithile faka ingxenye noma ngokuphelele ikheli elisenkambu Sesha amakhukhi.
Ngemuva kokwenza lesi sihlungi, umugqa owodwa noma eminingi izovela esikrinini nge amakhukhiyewebhu eceliwe. Manje kufanele ukhethe bese ucindezela ifayela le- X ukuqhubeka nokususwa kwayo.
Ukufinyelela ukucushwa kwe amakhukhi yesiphequluli Internet Explorer Landela lezi zinyathelo (zingahluka ngokuya ngohlobo lwesiphequluli):
Iya ku Amathuluzi, Izinketho ze-Intanethi
Chofoza ku- Ubumfihlo.
Hambisa isilayida ukuze ulungise izinga lobumfihlo olifunayo.
Ukufinyelela ukucushwa kwe amakhukhi yesiphequluli Firefox Landela lezi zinyathelo (zingahluka ngokuya ngohlobo lwesiphequluli):
Iya ku Izinkethoo Izintandokazi kuya ngohlelo lwakho olusebenzayo.
En Umlandokhetha Sebenzisa izilungiselelo zangokwezifiso zomlando.
Manje uzobona inketho Amukela amakhukhi, ungazisebenzisa noma uzenze zingasebenzi ngokuya ngokuncamelayo.
Ukufinyelela ukucushwa kwe amakhukhi yesiphequluli I-Safari ye-OSX Landela lezi zinyathelo (zingahluka ngokuya ngohlobo lwesiphequluli):
Iya ku Izintandokazi, khona-ke Ubumfihlo.
Kule ndawo uzobona inketho Vimba amakhukhiukusetha uhlobo lokukhiya ofuna ukulwenza.
Ukufinyelela ukucushwa kwe amakhukhi yesiphequluli I-Safari ye-iOS Landela lezi zinyathelo (zingahluka ngokuya ngohlobo lwesiphequluli):
Iya ku Izilungiselelo, khona-ke safari.
Iya ku Ubumfihlo nokuphepha, uzobona inketho Vimba amakhukhiukusetha uhlobo lokukhiya ofuna ukulwenza.
Ukufinyelela ukucushwa kwe amakhukhi isiphequluli samadivayisi Android Landela lezi zinyathelo (zingahluka ngokuya ngohlobo lwesiphequluli):
Qalisa isiphequluli bese ucindezela ukhiye Imenyu, khona-ke Izilungiselelo.
Iya ku Ukuphepha Nobumfihlo, uzobona inketho Amukela amakhukhiukunika amandla noma ukukhubaza ibhokisi.
Ukufinyelela ukucushwa kwe amakhukhi isiphequluli samadivayisi I-Windows Phone Landela lezi zinyathelo (zingahluka ngokuya ngohlobo lwesiphequluli):
Vula Internet Explorer, khona-ke Okuningi, khona-ke Isethaphu
Manje usungasebenza noma ungasebenzi ibhokisi Vumela amakhukhi.